Ciyaartoyda Tooska ah ee HTTP: 5 Astaamood Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato | Martech Zone
Ciyaartoyda HTTP Live Live: 5 Astaamood Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Arbacada, Maarso 20, 2019 Arbacada, Maarso 20, 2019 John Smith
Ciyaaryahan HLS taas oo sidoo kale loo yaqaan sida HTTP qulqulka tooska ah waa borotokool isgaarsiineed oo ah fikirka maskaxda Apple taasi oo markii hore loogu talagay si khaas ah qalabka Apple laakiin aakhirkii waxay noqotay mid la jaanqaadaysa aaladaha kale sidoo kale. Waxaa ka mid ah astaamaha lagu amaano ee kaladuwan, HTTP oo si toos ah ugu baahinaya barnaamijka qulqulka qulqulka tiknoolajiyada oo bartilmaameedsanaya macaamiisha qulqulka iyaga oo siinaya iyaga labadaba dalab iyo adeegyo toos ah oo loogu talagalay dhammaan qalabka Apple.
Maxaan ugu baahan nahay inaan u tagno tikniyoolajiyadda HLS Player?
Kahor intaanan u boodin halista isticmaalka a Ciyaaryahanka HLS aan marka hore aragno sababaha aasaasiga ah ee qofku u isticmaali karo meesha ugu horeysa.
Wada-noolaansho - Ciyaaryahan HLS wuxuu leeyahay meel balaaran oo taageerta macno kasta oo baari ah oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn Quicktime, Safari, daalacashada Google Chrome, Microsoft Edge, Linux iyo Microsoft taasoo ka dhigaysa HLS xulasho wanaagsan tartamayaasheeda.
Habka Toosan - HLS qulqulka waxay ku soo gudbisaa waxyaabaha maqalka iyo muuqaalka ah internetka si habsami leh. Inta badan adeegga fiidiyowga fiidiyoowga ah ee laga heli karo suuqa maanta ayaa looga baahan yahay inuu maro taxane socodsiin shaqo oo toos ah laga bilaabo qaabeynta qalabka kombiyuutarka illaa barnaamij dejineed laakiin dhinaca kale, HLS qulqulka waxaa lagu soo gudbiyaa dhammaan qalabka faylasha M3U8. Faylasha M3U8 waxay kakoobanyihiin meesha faylka warbaahinta kujiraan foomka liistada, halkaas oo loogu keydiyo sida marin fayl ah mashiinka maxaliga ah iyo URL loogu talagalay qulqulka tooska ah.
Waxay taageertaa qoraalada xiran Ciyaartoyda HLS waxaa ku jira qoraal xiran oo gudaha kujira waxaana lagu darayaa socodka gaadiidka ee MPEG-2.
Sidee ayuu u shaqeeyaa HLS Player?
The Ciyaaryahan HLS badanaa waxay ka kooban yihiin saddex qaybood, qaybta hore waa server, tan labaadna waa qaybiyaha qaybina kama dambaysta ayaa ah barnaamijka macmiilka.
Ciyaaryahanka Fiidiyowga HLS asal ahaan waxay heshaa talooyinka maqalka iyo muuqaalka fiidiyowga iyaga ayaa si qarsoodi ah u qarinaya iskuna soo koobaya qaab u dhigma.
Marka xigta qeybta qeybinta oo martigalisa taxane ah shabakadaha shabakadaha asalka ah, ayaa hela macaamilka codsigiisa oo dib looguugu soo diraa foomamka feylasha.
Halkaan macmiilku wuxuu ku aqrinayaa feylasha tusmada wuxuuna codsanayaa inuu soo celiyo waxyaabaha loo baahan yahay ee qeybaha lagu wadaago. Iyada oo gacan laga helayo Shabakadda Qaybinta Mawduuca (CDN), dhammaan codsiyadaan iyo jawaabahan waxaa lagu qabtay keydka. Tani waxay yareynaysaa culeyska server-yada websaydhka si aad u weyn marka macaamiisha kale ay codsadaan xog la mid ah.
Astaamaha HLS Player
Ciyaartoyga HLS waa heerka caadiga ah ee loogu talagalay dhammaan maqalka iyo muuqaalka fiidiyaha iyada oo ay ugu wacan tahay astaamo kala duwan oo kor u qaadaya aragtida aragtida iyada oo aan wax isdabamarin ah.
Iswaafajinta Bitrate Bitter - Haddii aad isticmaaleyso shabakad fiilooyin leh ama fiilo la'aan teknooloojiyada qulqulka bitrate-ka ee la-qabsiga waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha inay la qabsadaan tayada xawaaraha kala duwan ee firfircoon isla markaana ay hubiyaan tayada qulqulka ee aadka u fiican iyada oo aan wax hakad ah gelin. Ciyaartoyda HLS waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu fiican madal geeyo video halkaas oo isticmaaleyaashu ay la kulmi karaan sawir tayo sare leh iyagoo kaashanaya teknoolojiyaddan HLS ee ka hooseeya sidoo kale waxay u gudbin kartaa Html5 fiidiyowga fiidiyoowga ah ee tooska ah qaab aan xuduud lahayn. Sidaa awgeed, tiknoolajiyada HLS waxay weli u tahay halbeeg dahabi ah oo loogu talagalay in si toos ah loogu sii daayo codka iyo sidoo kale waxyaabaha ku jira fiidiyowga.
Ciyaaryahan Qaab Badan - Waqtiga maanta iyo da'da, ciyaaryahanka fiidiyoowga ah ee soo qulqulaya waa inuu awoodaa inuu ku soo gudbiyo waxyaabaha ku jira tayo aad u fiican iyadoo aan loo eegin qalabka ay arki karaan inay muhiim tahay. Ciyaartoyga HLS wuxuu adeegsadaa borotokoollada ugu badan ee socodka durdurinta ee baahinta warbaahinta taas oo adeegsanaysa teknolojiyaddii ugu dambeysay. HLS waxay u qulqulaysaa taleefannada casriga ah, kiniiniyada, kumbuyuutarrada iyo aalado kale oo nooc kasta ha ahaadeene sida MP4, M3U8 ama MPEG dash ama qaab kale oo waliba.
HLS & La-qabsiga Dash - DASH waa qaabka iswaafajinta la-qabsiga firfircoon ee beddelaya habka socodka HLS. Laqabsashada 'DASH' ayaa bixisa socodka heerka caalamiga ah kaas oo ku saleysan hab maamuuska HTTP. HLS iyo Dash Adaptive teknoolajiyada qulqulka, waxyaabaha ku jira warbaahinta waxaa laga soo gaarsiin karaa shabakadaha caadiga ah ee internetka.
Multi-bitrate HD Dejinta - Tikniyoolajiyadda HLS waxay si wax ku ool ah u isticmaashaa teknolojiyadda dejineysa dhowr-bitrate-ka halka ilaha fiidiyowga lagu qaabeeyo laguna qoro bitrates kala duwan laguna baahiyo Shabakadda Horumarinta Mawduucyada la doortay. Noocan multi-bitrate ama durdurro badan ayaa ka dhigaya kuwaan fiidiyaha fiidiyowga ah inay ka dhex muuqdaan tartamayaasheeda. Kuwani sidoo kale waxay u suurtageliyaan daawadayaasha inay doortaan il durdur ah iyadoo loo eegayo baaxadooda ballaadhan ee qaab aan xuduud lahayn Tusaale ahaan, haddii daawaduhu leeyahay xawaare ballaadhan, waxay dooran karaan 1080p60 ama xawaare dhexdhexaad ah waxay dooran karaan 480p ama 360p iyo wixii la mid ah.
HLS Qulqulka qulqulka - Asal ahaan, encryption-ka HLS wuxuu adeegsadaa habka AES encryption halkaas oo feylasha fiidiyowga lagu xirayo iyadoo la adeegsanayo algorithms gaar ah. HLS encryption qulqulka wuxuu adeegsadaa dhowr habab oo wax ku ool ah si loo hubiyo in xogta lagu kaydiyo hab maamuuska HTTPS iyada oo aan si toos ah banaanka looga soo saarin furaha feylka.
Si dhakhso leh loogu ciyaaro - Waqtiga loo yaqaan 'playback time' waa mid muhiim u ah fiidiyoow kasta oo fiidiyoow ah oo teknoolajiyadda HLS ah oo si wax ku ool ah u bixiya dib u soo kabasho dhakhso ah iyada oo gacan laga helayo adeegyada websaydhka amazon oo leh eber hoos u dhac.
Ciyaartoyga HLS wuxuu siiyaa taageero dhammaadka-dhamaadka adeegsadayaasha tayo aan fiicnayn oo xoogan oo ka mid ah qaabka kale ee socodka tooska ah. Isku soo wada duuboo, tiknoolajiyada qulqulka HLS waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah sida habka socodka la-qabsiga, waxay taageertaa aalado kala duwan, waxaa ku jira sicir-baddan badan oo laga heli karo kombuyuutarrada iyo aaladaha kala duwan ee mobilada si habsami leh.
La shaaciyey waa mid ka mid ah ciyaartoyda HLS ee ugu fiican suuqa maanta oo bixiya astaamo soo jiidasho leh kuwaas oo la siman tiknoolajiyada ugu sarreysa ee sare kuwaas oo siiya dadka isticmaala khibrad muuqaal oo aad u fiican. Xawaare si dhakhso leh loo socodsiinayo, Vplay waxay sii deysaa fiidiyowyada iyo waxyaabaha maqalka ku jira ee daruuraha martigelinta ee daruuriga ah.
Fiiri Vplayed HLS Player
Tags: 1080pIswaafajinta Bitrate Bitterqulqulka qulqulkacccdnloo maqli macmiilkaxiran xiranshabakada qaybinta waxyaabahadumisaanla qabsashada dhaashkahls la qabsihls sirtahls qulqulka qulqulkaCiyaaryahan hlshttp toos u geeyosocodka noolaanshaham3u8ayaa muujinayacodbixinta warbaahintaencoding-ka badan-bitrate-ka ahqaab ciyaartoy badanqaybahafiidiyoow toos ah u socdajilitaanka fiidiyowgala muujiyey
John wuxuu leeyahay 4+ Sano oo Khibrad ah oo Video ah Baahida (VOD) Khabiir. Wuxuu had iyo jeer baranayaa oo la wadaagayaa tikniyoolajiyadaha cusub Video On Demand Industry.
Farsamooyin Muhiim ah oo Naqshadeynta Webka ah si loogu daro Websaydhka Shirkadda Sharciga ah